कटरिना र विक्कीको के छ सम्बन्ध ?
मुम्बई । बलिउड नायिका कटरिना कैफ पछिल्लो समय चलचित्रभन्दा अभिनेता विक्की कौशलसँगको सम्बन्धका कारण चर्चामा छिन् । बुधबार कटरिना र विक्कीको विवाहको तयारीको खबर एकाएक फैलियो । समाचार भाइरल बनेपछि कटरिनाले आफै ती समाचारहरूको...
सुनिल सेट्टीले ‘एक्स–९’ मा कति लिनेछन् पारिश्रमिक ?
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सुनिल सेट्टीले नेपाली चलचित्रमा अभिनय गर्ने भएका छन् । त्यसका लागि सेट्टी काठमाडौं आउने निश्चित भएको निर्माण पक्षले दाबी गरेको छ । ‘एक्स–९’ चलचित्रमा अभिनयका लागि सेट्टी नेपाल आउने निश्चित...
यी नायिकाले मिलाइदिन्थिन् शाहरुखका छोरालाई गाँजा
मुम्बई । भारतीय नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरोले नायिका अनन्या पाण्डेको घरमा छापा मारेपछि तनाबको अवस्था सिर्जना भएको छ । शाहरुख खानको छोरा आर्यनका नजिकको साथी रहेकी अनन्यालाई एनसीबीले सोधपुछका लागि उनलाई नियन्त्रणमा लिएका हुन् ।...
श्रीमतीका कारण नायक शाहीद कपूर तनाबमा
मुम्बई । बलिउड नायक शाहिद कपूरकी श्रीमती मीरा राजपूत मालदिभ्स भ्रमणमा छिन् । उनका ग्ल्यामरस तस्बिरलाई प्रशंसकले अत्यधिक तारिफ गरिरहेका छन् । अब उनी मुम्बई फिर्ता भइसकेकी छिन् । आलोचना भएपछि शाहिदलाई तनाब भएको...
काठमाडौंँ । ‘मिस युनिभर्स नेपाल २०२१’ मा १६ प्रतियोगी भिड्ने भएका छन् । आयोजक उमङ्ग क्रियसनले बिहीबार साँझ दरबारमार्ग स्थित होटल याक एण्ड यतिमा ग्राण्ड फिनालेको प्रेस प्रिजेन्टेसन कार्यक्रमको आयोजना गर्दै प्रतियोगी सार्वजनिक गरेको...
मुम्बई । दक्षिण भारतीय नायिका सामन्था अक्केनेनी (सामन्था रुथ प्रभु) आफ्नो कामलाई थाँती राखेर बिदा मनाउन उत्तराखण्डको ऋषिकेश पुगेकी छिन् । उनले त्यहाँको केही आकर्षक तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सेयर पनि गरेकी छिन् । तस्बिरलाई...
काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर र अभिनेता जितबहादुर नेपाल ‘जितु’ले भेटवार्ता गरेका छन् । बुधबार भक्तपुरको बालकोटस्थित ओलीकै निवासमा पुगेर मानन्धर र नेपालले ओलीसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । भेटवार्ताका चाँजोपाँजो...
काठमाडौँ, १ कात्तिक । नेपालको बहुपति प्रथाका बारेमा निर्मित वृत्तचित्र फिल्म ‘सहायक श्रीमान’ (को–हजबेन्ड) युरोपको प्रतिष्ठित चलचित्र महोत्सवमा अवार्ड जित्न सफल भएको छ । स्लोभाकियाको पोपरोडमा आयोजित २९औं इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टिबल अफ माउन्टेन फिल्मस्...
यसरी मनाए सेलिब्रेटीले दशैँ (तस्वीरसहित)
काठमाडौँ, २९ असोज । आज नेपालीहरुको महान् पर्व विजयादशमी टीका ग्रहण गरेर मनाइएको छ । आफू भन्दा ठूला मान्यजनबाट टीका र आशीर्वाद ग्रहण गरेर मनाइएको छ । जसमा राजनीतिज्ञदेखि विभिन्न सेलिब्रेटीहरुले दशैँ मनाएका छन्...
मैले विवाह गरेँ कृपया ट्रोल नगर्नुस्ः मनोज गजुरेल
काठमाडौँ, २५ असोज । चर्चित हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले दोस्रो विवाह गरेका छन् । उनले आफूले विवाह गरेको सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका हुन् । उनले विवाहको फोटो पोस्ट गर्दै विवाहका विषयमा ट्रोल तथा नकारात्मक...
परेश रावलले धेरै पैसा मागेपछि हटाइयो
मुम्बई । बलिउड फिल्म ‘ओ माइ गड २’मा अभिनेता परेश रावललाई आउट गरिएको छ । ‘ओ माइ गड’ सन् २०१२ को सर्वाधिक मनपराइएको बलिउड फिल्म थियो । अभिनेता अक्षय कुमार, परेश रावल र मिथुन...
‘थलाइवी’को प्रशंसा गर्न कंगनाको दवाव
मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री कंगना रौनतले आफ्नो फिल्म ‘थलाइवी’को तारिफ नगरिदिएको भन्दै आफ्नै क्षेत्रका सेलिब्रेटीसँग भडकिएकी छिन् । १० सेप्टेम्बरमा उनको फिल्म भारतका सिनेमा हलहरूमा प्रदर्शन भएको थियो । बायोग्राफिकल फिल्म रहेको थलाइवीमा कंगनाले...